China excavator ịwụ ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | MINYAN
excavator ngwa di na nwunye
excavator sikwuo ike ịrụ ọrụ ịwụ
bọket ikwapu bọket
ịwụnye nkume ịwụ
ịwụ excavator earthmoving ịwụ
Mini ịwụ obere scoop 40 obosara
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ịwụ ahụ siri ike, bọket ahụ siri ike ma sie ike. Excavator rock ịwụ adapts thicken efere, na ala ịgbakwunye nwee ume efere, tinye n'akụkụ nche efere, wụnye n'akụkụ nche efere, elu ike ịwụ ezé njide, adabara elu eyi oge, dị ka gravel,
Excavator rock ịwụ adapts thicken efere, na ala tinye nwee ume efere, tinye n'akụkụ nche efere, wụnye n'akụkụ nche efere, elu ike ịwụ ezé njide, adabara elu eyi oge, dị ka gravel, konkiri na ore Ngwuputa n'okpuru ike loading arụmọrụ. Ihe Nlereanya: Igwu ala ebe ndu ndu sitere na 200 rue 400 awa na Penetration Plus Atụmatụ. Ihe eji eme akwa ime ala bu ihe kariri 50% di nkpa karia Oru oria Oru.
Mpempe akwụkwọ dị n'akụkụ ihe dị ka 40% buru ibu karịa ihe nyocha na-ewusi ịwụ ala maka nchekwa agbakwunyere megide abrasive na gouging wear. A na-ahazi ihe nkwụnye na ndụmọdụ iji kwado ibu dị elu na ọnọdụ abrasion.
A na-ebu ụzọ gụọ sideba maka ndị na-egbutu nhọrọ na ndị nchebe n'akụkụ maka bọket ka ukwuu.
Mbukota na itinye: Minyan Bucket nwere ndị otu egwuregwu ịdebe na ịwụ bọket na akpa.Anyị maara oke mmachi maka mba, anyị maara etu esi echekwa ohere itinye ngwaahịa ndị ọzọ na akpa iji chekwaa ibu mmiri nke ndị ahịa.Anyị na-eji ihe nkiri plastik echebe ịwụ site na mmiri ozuzo na uzuzu uzuzu maka mbupu LCL. Tinye owu n’etiti bọket iji chebe eserese ahụ. Jiri eriri dị ike iji tinye bọket na pallet iji zere bọket na-ama jijiji ma daa n'oge mbupu.
Kedu ihe anyị na-eji?* Q355B maka ọkụ ọrụ gburugburu ebe obibi iji nyere ndị ahịa aka ịchekwa ego, dịka ọmụmaatụ: Gwuo slop, trenchi, apịtị, ájá, unyi.* NM460 maka ọrụ dị oke egwu ejiri mee ihe na mwakpo ahụ, dịka, mbelata, eriri ala ala, na iyi efere.* Bislloy si Australia, maka ọrụ siri ike na-enye ịwụ ezigbo nchekwa, n'ezie ọnụahịa ga-adị ntakịrị elu* HARDOX si Sweden, Mba. 1 ihe siri ike, naanị maka ndị ahịa chọrọ pụrụ iche ma ghara iche maka ọnụahịa ahụ nke ukwuuMinyan bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ahụmịhe karịa iji mepụta mgbakwunye Excavator, nwee ndị ọrụ injinia anyị, ndị ọrụ ahịa, ndị na-ebugharị & ndị otu na-arụ ọrụ, yana ndị ọrụ 100 ga-akwụ 100% anya iji wuo 100% ngwaahịa dị mmaCompanylọ ọrụ anyị: XUZHOU MINYAN Bubata & Mbupụ CO., LTDỌnọdụ anyị: Xuzhou Jiangsu ógbè, nnukwu ewu ígwè isi na China.Ngwaahịa anyị: ỌR EX AKW BKWỌ AKW ,KWỌ, ỌR E AKWVKWỌ AKWMKWỌ AKW ,KWỌ, AKW SKWỌ AKW BKWỌ AKW ,KWỌ, AKW TKWỌ TEETH, ỌR EX AKW ,KWỌ AKW productsKWỌ, ngwaahịa anyị dabara maka ụdị ụdị excavator niile. Dị ka CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAIỌnọdụ ndị ahịa anyị: Australia, America, Canada, Panama, Brazil, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Russia, Sweden Norway, Chile, France, Algeria, Angola, South Africa, India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Singapore, Philippines na ndị ọzọ.Anyị anaghị akwụsị mma, chọrọ ịbụ ndị kachasị mma na ụlọ ọrụ a, ka ị bụrụ onye ntụkwasị obi na-arụpụta ihe ịwụ.
Tụkwasịnụ Ikike:300 Ibe / iberibe kwa ọnwa excavator ịwụNkwakọ ngwaahịa & NyefeeNkwakọ ngwaahịa nkọwapallet osisi ka ewepu ịwụ awụLoading n'ọdụ ụgbọ mmiriLianyungang / Qingdao / Shanghai
Ibu (iberibe) 1 - 5 6 - 10 11 - 20 20
Est. Oge (ụbọchị) 15 20 30 Ndi kpakorita
Nkwụnye, Ezé, Side cutter
Tumadi eji ogwugwu onu na ájá, ajịrịja nkume na
ala na ọkụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi.
Tumadi eji egwu ala ike ala, weere na a
okwute na-esighị ike na ụrọ, ụrọ dị nro na
ọkụ ọzọ na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi.
Tumadi eji maka Ngwuputa ike gravel weere na
ala siri ike, nkume siri ike ma ọ bụ nkume, mgbe
ọgbụgba ọkụ ma ọ bụ na-ebugharị, na ibu ibu.
Nkwụnye, Ezé, Side n'echebe, Nkuku shrouds
A na-ejikarị ya maka ọnọdụ abrasion dị oke elu
tinyere oke quartzite, slag slag,
sandstone na ore.
Eji maka ọkụ ọrụ gburugburu na obere
ndị na-egwupụta ihe.
Ejiri maka osimiri, ọdọ mmiri na okirikiri gburugburu.
Etinyere nhicha ọrụ na ọwa na ọwa mmiri.
Etinyere inyocha sieving na ogwugwu onu
nke ihe dị larịị.
Ihe edeturu: OEM ma obu mmeputa mmeputa di
Buwụ kewara: zuru ezu n'okpuru
Kachasị ike mesikwuru ewu
maka ike na arụmọrụ dị elu
kwekọrọ na ike igwe. Ntụtụ
na ma ọ bụ raara onwe ya nye dị,
2. Hinge efere
Gafere tube torque ka mma
ibu nkesa na anwụ ngwa ngwa.
Nga gbapuru ịgbakwunye sidebar nchebe.
4. Akụkụ Akụkụ
5. Side eyi efere
Efere dị n'akụkụ na-ezute na ala
eyi efere maka enweghị nkebi nkuku
nchebe. * Ngwá ike dị elu
tinye n'ọrụ maka nchebe agbakwunyere.
6. Isi Edge
Kwụ ọtọ ma ọ bụ "spade", dabere na
Maka oke rigidity.
8. Otu Njikwa
Na-enye ohere maka mgbazi dị mfe maka eyi
n’etiti osisi na bọket.
9. Ezé (Atụmatụ)
Ejiri ígwè jiri ihe arụ
nke na-ejide ekweghị ekwe ogologo oge
ndụ siri ike egwu ala ngwa
10. Ndị na-egbutu egbe na sidebar na sidebar
Maka nchebe na ịbanye.
11. 2-eriri nkwụnye
Dual okirikiri udi, enwekwu ikiri ụkwụ nwechapụ na mma eyi.
13. Kwụ Bottom Eyi efere
Na-echebe mpaghara mkpuchi, na-agbakwunye, ịwụ maka ike na nrụgide dị ukwuu. Mfe dochie.
14. Welienụ Anya
Large akaghị na thinner anya imewe maka mfe shackle kenha.
Bọket dị mma maka ọnọdụ ọrụ ndị a.
Họrọ Ezi Ume
Họrọ ịwụ na-ezighi ezi nwere ike belata nrụpụta nfe, wee nwekwuo ụgwọ ọrụ site na 10-20% ma ọ bụ karịa. O nwekwara ike ịkpata ike ọgwụgwụ na-enweghị isi maka igwe na ịwụ.
Maka ọnọdụ abrasion dị oke elu gụnyere granite quartzite dị elu. Omuma atu: Ngwuputa onodu ebe ndu ndu pere aka
karịa ma ọ bụ hà nhata 200 awa na Atụmatụ ọrụ mgbakwunye. Oke Ọrụ Bọket na-armored na ụma nchebe si abrasion na gouging eyi. Ha gụnyere: Corner Shrouds [A], Ndị na-echebe sidebar nwere Shear Blocks [B], Ihe ndị ọzọ a na-eyi na n'akụkụ [C], na Base Edge End Protectors [D]
Ọbụna nchebe dị maka bọket na igwe buru ibu. bọket gụnyekwara: Liners [E], Base Edge Seegments [F] na Mechanical Attached Wear plate (MAWPs) (MAWPs egosighi. Ọ dị na ala nke bọket ahụ.) Mpempe akwụkwọ dị n'akụkụ ka ibu; na Adapters na ndụmọdụ dị oke iji kwado ibu dị elu na ọnọdụ abrasion.
Nke gara aga: ịwụ excavator earthmoving ịwụ
Osote: bọket ikwapu bọket
Excavator Rock Screen ịwụ
Excavator Screen ịwụ
Mini ịwụ obere scoop 70 obosara